Archives router - SmartMe
Archives tag: router
Dom » Entina notsongaina miaraka amin'ny "router"
Xiaomi Router AX3600 miaraka amin'ny anglisy!
18 Novambra 2020
AX3600, ny router, xiaomi
Farany! Raha manana ny router Xiaomi matanjaka indrindra - AX3600 ianao, dia misy vaovao tsara ho anao :) Rehefa dinihina tokoa, ho fanampin'ny Sinoa, afaka mamadika ny teny anglisy ianao! Nahazo rindrambaiko manerantany ny router. Xiaomi Router AX3600 no router matanjaka indrindra ...
Xiaomi Mi AIoT Router - Famerenana horonantsary an'ny router Xiaomi AC2350 miaraka amin'i AIoT
ac2350, mi aiot router, ny router, xiaomi
Ny AC2350 Router no Xiaomi Router farany miaraka amin'ny AIoT. Inona no tsara momba azy ary inona no tokony hatsaraina? Zahao ny sarimihetsika!
Aterineto, Xiaomi, router, AIoT, i.e. Xiaomi AC2350 famerenana
ac2350, ny router, xiaomi
Nahazo azy izahay! Mbola mafana, saika mahitsy avy amin'ny kasety. Iray amin'ireo vokatra vaovao avy amin'ny manda fantatsika rehetra avy amin'ny orinasa mitondra taratasy roa MI. Xiaomi AC2350 Mi AIoT router. Antena enina ho an'ny Wi-Fi, iray ho an'ny AIoT, ...
Ny router Xiaomi vaovao dia manolotra betsaka betsaka ho an'ny kely (WiFi 6, Mesh ary maro hafa)
ax1800, ny router, xiaomi
Araka ny efa nampoizina, omaly dia naneho ny fizaram-panjakany farany i Xiaomi. AX1800 dia router Mesh izay rakotra teknolojia vaovao ary lafo mihoatra ny PLN 200. Atombohy amin'ny WiFi 6. Izany dia fenitra efa misy ...
Huawei ny famoahana ny lalana avy amin'ny NFC. Fa inona? Zahao ho anao izy io
huawei, nfc, ny router
Andro manan-danja ho an'ny Huawei izao, izay namoaka vokatra maro indray mandeha. Ny iray amin'izy ireo dia ny router, izay tsy fitaovana mahazatra toy izany mihitsy. Izy io dia miaraka amin'ny teknolojia NFC. Hihaona amin'ny Huwawei A2! Impiry ...
New Route Orbi avy amin'ny Netgear
volovolo, netgear, orbi, ny router
Navoakan'ny Netgear ny làlan-java-manidina kely vaovao avy amin'ny andian-dahatsoratra Orbi. Ny vokatra Orbi vaovao dia misy amin'ny roa-telo, na efatra-fonosana, ary natao hanafenana faritra hatramin'ny 500 metatra toradroa. Izy ireo koa dia aseho amin'ny alàlan'ny vaovao vaovao ...